Fitandroana ny filaminana: entanina ny vehivavy hiditra ao anatiny | NewsMada
Fitandroana ny filaminana: entanina ny vehivavy hiditra ao anatiny
5% n’ny vehivavy ihany no manana andraikitra ao anatin’ny tafika sy ny fitandroana ny filaminana eto Madagasikara, araka ny fanadihadiana nivoaka nandritra ny fanamarihana ny 16 andro iadiana amin’ny herisetra mifototra amin’ny mahalahy na mahavavy. Vehivavy avokoa ny antsasamanilan’ny mponina ka tokony hampirisihina izy ireo hifaninana hiditra ho mpianatra zandary na polisy. Nisy ny fanavaozana ny sehatry ny filaminana sy ny fandriampahalemana (RSS), ny taona 2014 ka tokony hampidirina ao anatin’izany ny fanentanana ny vehivavy hisafidy ny asan’ny mpitandro filaminana, araka ny fanazavan’ny mpandrindra ny Sampandraharahan’ny Firenena mikambana eto amintsika, i Violette Kakyomya, ny herinandro lasa teo.
Tafiditra amin’ny fandaharanasan’ny Firenena mikambana ho fanamafisana ny fandriampahalemana ARSSAM ary tohanan’izy ireo ny fanavaozana ny filaminana sy ny fandriampahalemana (RSS) ary tokony handraisan’ny vehivavy anjara amin’ny dingana rehetra. Hafa kokoa ny fandraisan’ny vahoaka ny vehivavy mpitandro filaminana izay tsy tia mampiasa hery loatra eo am-panaovany ny asany.
Efa misy ny ezaka ataon’ny fanjakana hampitomboana ny isan’ny vehivavy raisina ho mpianatra ho zandrary na polisy fa tokony hamafisina ny fanentanana ho mora kokoa ny fahazoany mandray anjara amin’ny fifaninanana samihafa.